Euro kuti Dollar Gengi nhasi. Euro inokosha mu US dhora nhasi.
Euro kuti Dollar Gengi nhasi
1 Euro (EUR) vakaenzana 1.05 US dhora (USD)
1 US dhora (USD) vakaenzana 0.95 Euro (EUR)
The exchange of Euro kusvika US dhora pamwero chaiwo wekutsinhanha nhasi 29 Chikumi 2022. Ruzivo kubva kunobva. Isu tinoshandura mwero wekutsinhana we Euro kuenda ku US dhora papeji ino kamwe chete pazuva. Mari yekutsinhana kwemari ine huremu hwekukosha pazuva pazuva zvichienderana nemhedzisiro yekutengeserana pane yekutsinhana uye yakagadzirirwa zuva rose nebhangi renyika. Chirevo chemazuva ese chakagadziriswa chemari yekushandura chirevo chinowanikwa pane ino saiti.
Foreign Gengi akagadziridzwa 30/06/2022
Mari Exchange Euro / US dhora Currency kutendeuka muEurope
1 Euro ikozvino yema 1.05 US dhora kuEurope. 1 Euro yakakwira ne 0 US dhora nhasi mubhangi rinotungamira reEurope. Euro mwero wekutsinhanha iri kukwira kutarisana ne US dhora maererano neEurope. Nhasi, 1 Euro inodhura 1.05 US dhora mubhangi reEurope.
ECB mari Exchange akagadziridzwa 29/06/2022
Pindura Euro Kuti US dhora Euro Kuti US dhora kugara Forex Exchange musika Euro Kuti US dhora Gengi nhoroondo
Euro Kuti US dhora Exchange zvazvingava nhasi pa 29 Chikumi 2022
Mari yekutsinhanisa kwe Euro kusvika ku US dhora mumazuva mashoma apfuura inogona kuvonekwa muyenzaniso yedu kubva mudura rakaratidzwa patafura. Iyo tafura ine zviyero zvekuchinjana kwemazuva apfuura. Enzanisa mwero wekutsinhanisa we Euro ku US dhora mumazuva mashoma apfuura kuti unzwisise masimba ehuwandu hwekuchinjana. Iyo webhusaeteestoday.com webhusaiti inokubvumira kuti uone kuchinjanisa mitengo yanhasi, zuva 1 rapfuura, 2 mazuva apfuura, 3 mazuva apfuura, nezvimwe.
1.05 US dhora nhasi inodhura 1 Euro ku exchange rate. Mutengo we 5 Euro ku US dhora ikozvino yakaenzana ne 5.26. Mutengo we 10 Euro ku US dhora ikozvino yakaenzana ne 10.53. 26.32 US dhora mutengo we 25 Euro pa mwero wekutsinhana ikozvino. 1 Euro ikozvino 1.05 US dhora pamwero wekutsinhana. 1 Euro yawedzera kudhura ne 0 US dhora nhasi zvichienderana nekutsanangura kwebhangi renyika.
1.05 USD 5.26 USD 10.53 USD 26.32 USD 52.64 USD 105.28 USD 263.19 USD 526.39 USD
Mutengo we 10 US dhora pamwero wekutsinhana ndeye 9.50 Euro. Mutengo we 50 US dhora pamwero wekutsinhana ndeye 47.49 Euro. 94.99 Euro nhasi inodhura 100 USD mukutsinhana rate. Mutengo we 250 US dhora pamwero wekutsinhana ndeye 237.47 Euro. Euro Gengi rekutsvagisa riri kukura nhasi vachipesana ne US dhora. Nhasi, 1 Euro inodhura 1.05 US dhora mubhangi renyika.
9.50 EUR 47.49 EUR 94.99 EUR 237.47 EUR 474.93 EUR 949.87 EUR 2 374.67 EUR 4 749.34 EUR